Global Voices teny Malagasy » Mangina Tamin’ny Fipoahana Nahafatesan’Olona Tao Qingdao Ny Fampahalalam-baovao Shinoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Novambra 2013 21:56 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Voina
Olona 52 no namoy ny ainy ary maherin'ny 100 no naratra noho ny fipoahan'ny fantso-tsolitany lehibe tao Qingdao, iray amin'ireo tanàna Atsinanan'i Shina, tamin'ny 22 Novambra 2013. Orinasam-panjakana Sinopec Corp no tompon'ny fantsona, iray amin'ireo orinasan-tsolitany goavana indrindra ao Shina. Taorian'ny loza, nandefa fialan-tsiny nalefa mivantana tao amin'ny fahitalavi-panjakana Shinoa ny filoha mpitantana ny Sinopec, Fu Chengyu.
Na dia izany aza, vitsy ny vaovao mikasika ny fipoahana azon'ireo fampahalalam-baovao tao Qingdao, ka tsy dia nisy ny fitantarana ny loza tamin'ny fandaharana fampahalalam-baovao ny ampitso. Tamin'ireo sarin'ny fipoahana niparika be tao amin'ny media sosialy Shinoa, nanome tsiny ny fanginan'ny fampahalalam-baovaom-panjakana ny tsikera maro avy amin'ny mpiserasera.
Namoaka ny gazety marainan'i Qingdao tao amin'ny Weibo i “Baigu Lunjin” ary nitsikera  [zh] hoe:
Namono olona 52 farafahakeliny ny loza nateraky ny fipoahan'ny fantson-tsolitany. Pikantsary avy amin'ny youku 
Faharetana hafiriana no ilaina raha hisafidy hangina manoloana ireo aina 47, fahaverezana mampivarahontsana ho an'ireo fianakaviana am-polony! Amin'ny maha olon'ny fampahalalam-baovao anao, mendrika ny fandatsahan-drà ve ianao ry Qingdao? Mendrika ireo aina tsy manantsiny ireo ve?
Raha tokony hilaza ny marina mikasika ny loza, nanjary sehatra nandokafana ireo “manampahefana ambony” ny kaonty ofisialin'i Qingdao ao amin'ny Weibo. Tamin'ny 24 Novambra, hoy izy namoaka  [zh]:
Androany atoandro, nihaona am-pitiavana tamin'ireo mpiasan'ny hopitaly mitsabo ireo naratra tamin'ny fipoahan'ny Sinopec ny Sekretera jeneraly Xi Jinping. Naneho fisaorana sy fankasitrahana an'ireo dokotera sy mpanampy mpitsabo (infirmiera) i Jinping ary nankasitraka ny ezak'izy ireo.
Notsiratsirain'ireo mpiserasera ny tatitra, miaraka amin'ilay mpisera manokana “CE sir”, nanoratra  [zh] hoe:
Loza mahatsiravina tokoa, maro ireo olona namoy ny ainy sy naratra, saingy tahaka ny milaza tsara ny tatitra!
Namaly ny voina ny loharanom-baovao ivelan'i Qingdao, nahitana ny Vaovaon'i Beijing nametraka fanontaniana  [zh] momba ny fipoahana:
1. Fa ahoana no mora miraraka ao amin'ny rafitr'asa monisipaly ny solika? 2. Nahoana no akaiky loatra ny toeram-ponenana ny fantsombe? 3. Nandritra ny adiny fito nanomboka tamin'ny solitany raraka ka hatramin'ny fipoahana, nahoana no tsy nahavita namindra ireo olona mba hanavotra aina ny governemanta ao an-toerana? 4. Taorian'ny firaraky ny solitany, nahoana no tsy nitatitra ny loza tamin'ny tompon'andraikitra an-dranomasina ara-potoana ny Sinopec ? 5. Nanatontosa “fanarahamasom-piarovana” ny Sinopec iray volana mialoha tamin'ny Oktobra, koa nahoana no tsy nahavitra nisoroka izao loza izao izy?
Olo-malaza ao amin'ny aterineto “Pretendtobein NY” nanoratra  [zh] hoe:
Maro tamin'ireo media no sahirana nanoratra vaovao amin'ny lafiny tsara mikasika ny loza tamin'ireo andro ireo, izay mampahatsiahy ahy ilay fifandonam-piarandalamby tao Wenzhou . Fito andro taorian'ny loza, noraràna ny fitantaran'ny media momba izany. “Orana mikija mandritra ny fito andro, andro iray ho an'ny fampitandremana roa” no lohatenim-baovao nisongadina tao amin'ny Vaovaon'ny Beijing tamin'izany andro izany. Milaza sompirana ny fito andron'ny olona maty ny “fito” notononina voalohany, ny farany kosa milaza sompirana ny fampitandremana amin'ny fandraràna ny media. Hoy ny gazety mpivoaka isan'andro Oriental Sports nanoratra: “Afaka manakombom-bava ianao fa tsy afa-manakombona ny alahelo.” Mbola hisy hatrany ny sivana, saingy ny tena toetran'ny media indray ny mahita hatrany ny fomba hanehoany hatrany ny herimpo sy ny fahatsiarovan-tenany.
Mpanoratra Tianyou nanoro-hevitra  [zh] hoe:
Mitaky aho ny hampisaonana ny saina ho eo amin'ny atsasaky ny andry ao amin'ny androm-pisaonana ireo maty. Tsy hoe fomba iray hisaonana ireo lasibatra ihany izany, fa fomba iray hampahatsiarovana ireo orinasam-panjakana hitandrina kokoa amin'ny fiarovana ny famokarana.
Ho setrin'izany toro-hevitra izany, maro ireo namaly [zh] amin'ny tarehy ratsy manao hoe:
Raha mampidin-tsaina noho iny tranga iny isika, dia mino aho fa tsy hilaina intsony ny tapany ambony amin'ny andrin-tsaina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/11/29/54943/
 nametraka fanontaniana: http://weibo.com/1651428902/Akd3Wugtl
 fifandonam-piarandalamby tao Wenzhou: http://en.wikipedia.org/wiki/Wenzhou_train_collision